Barcelona maku saxan tahay inay Samuel Umtiti iibiso si ay De Ligt gacanta ugu soo dhigto - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Barcelona maku saxan tahay inay Samuel Umtiti iibiso si ay De Ligt gacanta ugu soo dhigto
Calciomercato ayaa ogaatay in kooxda Barcelona maamulkeeda qorsheenayaan xagaagan iska iibiyaan daafacooda reer France Samuel Umtiti si ay lacago ugu helaan soo qaadashada Matthijs de Ligt oo daafaca dhexe Ajax iyo xulka Holland uga cayaaro.
Samuel Umtiti xili cayaareedkan shan bilood oo ka mid ah dhaawac ayuu ku maqnaa waxaana inta badan booskiisa buuxiyay Clement Lenglet oo Gerard Pique inta badan ka garab cayaaro sidaa darteed Barcelona maamul ahaan waxay isla qaateen in Umtiti laga iibiyo kooxaha Premier League ee lacagta heestaan.
Man United iyo Chelsea ayaa doonayaan Umtiti oo ay Barca aaminsan tahay 60m oo pound inay ku heli karto kadibna lacagtaas 15m ayay ku dari doonaan si ay Matthijs de Ligt Ajax uga soo qaataan.
Sidoo kale Calciomercato ayaa aaminsan in kooxda Juventus bartilmaameed ka dhigan doonto Samuel Umtiti haddii Barcelona suuqa soo dhigto madaama Juve haatan dafacyadeeda intooda badan da’da ka daba timid sida Barzagli, Chellieni iyo Bonnucci.
Haddaba arcelona maku saxan tahay inay Samuel Umtiti iibiso si ay De Ligt gacanta ugu soo dhigto?